Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा १० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल विक्री – Emountain TV
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा १० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल विक्री
काठमाडौं, २८ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल विक्री गरेको छ । बैंकले बोलकबोलको प्रक्रियाबाट उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको हो । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएको अवस्थामा केन्द्रिय बैंकले ट्रेजरी बिल विक्रि गर्ने गर्दछ ।
मौद्रिक व्यवस्थापन गर्नको लागी केन्द्रीय बैँकले प्रयोगमा ल्याएको उपकरण हो ट्रेजरी बिल । ट्रेजरी बिल एक वर्ष वा एक वर्ष भन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो ।
ट्रेजरी बिल २८ दिने, ९१ दिने, १ सय ८२ दिने र ३ सय ६४ दिने गरी ४ अवधिको हुन्छ । यी विभिन्न अवधिका ट्रेजरी बिलहरू राष्ट्र बैँकले आवश्यकता अनुसार निष्कासन गर्दछ ।
वित्तीय बजारमा तरलता अधिक भएको अवस्थामा बैंकले अन्तर बैंकिङ ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा राख्न र तरलता प्रशोधन गर्न यस्ता वित्तीय उपकरणको प्रयोग गर्ने गर्दछ । बैँकले मौद्रिक व्यवस्थापनको लागी साउन २७ गते १० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल विक्री गरेको छ । ट्रेजरी बिलमा संस्थागत खरिदकर्ता मात्र सहभागी हुन पाउने छन् ।
बजारमा तरलता बढि भयो तर बैँकहरुले लगानी गर्ने अवसर नपाएको अवस्थामा बैँकहरुको खर्च बढ्न जान्छ र यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि तरलताको उपयुक्त व्यवस्थापन हुन सकेन भने बैँकहरुले जोखिमयुक्त ठाउँमा पनि लगानी गर्न सक्छन् । बैँकहरुको यस्तो कार्यले दिर्घकालीन रुपमा कर्जामा समस्या आउने भएकोले तरलता व्यवस्थापनको लागी ट्रेजरी बीलको प्रयोग गरिन्छ ।
ट्रेजरी बिलमा ब्याजदरको सट्टामा डिस्काउण्ट दर लागू गरिन्छ । डिस्काउण्ट दर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुन्छ । राष्ट्र बैंकले निष्काशन भएको ट्रेजरी बिल ९१ दिन अवधिको रहेको छ । यो बिल कात्तिक २६ गते परिपक्व हुने छ ।